Tag: ahia akpaaka atụmatụ | Martech Zone
Tag: ahia akpaaka atụmatụ
Azụmaahịa ahịa bụ buzzword nke yiri ka ọ na-emetụta ihe niile n'oge a. Ọ bụrụ na ikpo okwu ngwanrọ nwere ike ịkpalite ozi nye onye nnata site na API ha, a na-akwalite ya dị ka akpaaka ahịa. N'uche m, nke a bụ emeghị ihe n'eziokwu. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ ọrụ akpaghị aka nke dabara na atụmatụ ahịa ha, ọ bụ ihe ngwọta akpaaka ahịa. N'ezie, ekwenyere m na imirikiti ahịa akpaaka ahịa dịnụ - ọbụlagodi nke kachasị - nwere
Anyị edeela ihe omimi banyere usoro ịzụ ahịa ahịa ahịa, ihe ndị dị oke egwu, yana nsogbu ndị metụtara ịme atụmatụ ndị ahụ iji duga ụzọ. Ebumnuche nke igwe na-ere ahịa bụ imeri nnukwu ọdịiche dị n'etiti ahịa na ahịa, na-eme ka ọ bụrụ ndị ahịa na-ere ahịa n'oge kwesịrị ekwesị. Nke a na - enyere aka melite ogo ndu yana belata mbọ dị mkpa iji mechie ire ere ahụ. Mee elu mee ala, ọnụ ọgụgụ ndị na-eduga, uru